Dhoofi Hana Dhadhamin!!!=Ha u qaadan Cashar Siyaasadeed, waa mid Dhaqaale=. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Dhoofi Hana Dhadhamin!!!=Ha u qaadan Cashar Siyaasadeed, waa mid Dhaqaale=.
Dhoofi Hana Dhadhamin!!!=Ha u qaadan Cashar Siyaasadeed, waa mid Dhaqaale=.
Shidaalka Somaliya loo soo saari Doono, 15 ka Sanno ee ugu horeyso Somalidu waxba kuma lahan dakhliga miyaa?, Sabab.
Wadan kasta waxa uu leeyhay Heshiis shidaal “ Production Sharing Agreement ( PSA)” kaa oo waddan weliba maslaxadiisa si waafaqsan u Qorato.
Annaga keena “ Somali Petroleum Bill” waxaa Ansixiyay Golaha wasiirada , laakin Barlamaanka waxaa loogu lifaaqay petroleum acting bill ee gooni looguma sharaxin, weyna ansixiyen. waxaa dib loo habeeyay sharcigii Baarlamaankii Hore 2008 uu Baydhabo ku ansixiyay. ( The Model PSA of Somalia is attached as an Annex in the Petroleum Law 2008. The Petroleum Law was ratified by the Baidoa Parliament in 2008. This model is out-dated and requires revision).
Waxaa kale oo jira lacag laga qaado shirkadaha Petrolka ka hor inta eyna soo saarin shidaalka “Service rent Royalty” sababta oo ah dhulka aad wax ka baareysid ayaa fasax gaar ah u baahan, Lacag ayaana laga qaada inta shaqada Baaristu socoto, waxaa kale oo heshiiska lagu qoraa, Haddii dhulkaa shidaal laga helo dhibaatada Deegaan ee ka dhalan doonta in Lacag meel loo sii dhigo, si Muddo kadib deegaanka sidiisii loogu soo celiyo “Environmental destruction”.
Lacaghaa Caalamka oo dhan, Mid horaaba loo sii qaadaa tan kalena waa la isla meel dhigaa wax soo saarka ka hor, annaga taasi iima muuqato. Faa’iidada sida loo qeeybsanayana gooni ayaa loogu heshiiyaa. Dhinaca Kale annagu Xubin kama nihin OPEC waxaa suura gal ah in Sicirka iyo Caddadka la soo saarayo nalagu xumeeyo haddana hore looga fekerin.
Annaga Sharciyada shidaalka waxaa noo diyaariyay khabiir lagu magacaabo Mr. Bill (Cosar?) laga yaabee kharajka uu ku diyaarinayay sharcigaa in ey bixiyeen shirkado shidaal, waana suura gal in uu maslaxadooda tix galiyay.
Soo Qaado SPA –ga Somalia kadibna waxaad galisa ama ku dabakhdaa Formulada Cilmiga ah ee – Fiscal Analysis of Resource Industries (FARI) oo ey leedahay Hayada Lacagta Aduunka IMF waxa kale oo aad galisaa (Simulation Modeling and Analysis ) oo ey design-keeda ledahay IMF .
Markaad is dhax galiso SPA + FARI+ SM&A Fiiri Natiijada kuu soo bexeeyso!.
waxaa kuu soo baxayo haddii aad Formulahaa Galiso in aanan wax faa’iidaa ama Lacag ah aanan ku leheeyn 15ka sanno ee u horeyso oo loo qaadanayo kharajikii ey shirkaduhu galeen, markii 15 sanno ey qaataan wixii petrol ah ee soo baxo kadib ayaan sugeeynaa Faa’iidada, lagaba yaabee in shidaalka ceelkaa ku jiro uu dhamaado 15kaa sanno gudaheeda, Annaga oo aanan ka helin wax dakhli ah.
June 18/2018 weli dowladda dhexe iyo dowlad gobaleedyadu waxa ey ka doodayeen sida ey dhaxdooda wax u qaybsan lahaayeen , maxaaba laga doodayaa haddaanba 15ka sanno ee u horeysa aanan waxba ku leheyn.( Fiiri Sawirada: 1-10)
Waxaan jeclaan lahaa in Baarlamaanku uu Dib u eego, oo Gooni uu uga doodo iyada oo aan Lifaaq aheeyn oo Asalkii ah.
FG: Dhinaca Somali land waxa ey soo saareen (.The Somaliland Mining Code iyo The Somaliland Mining Regulations) oo dhameystiran, Culeysna iigama muuqdo. Laakin weli ma dhameystirin sharcigii shidaalka (The Republic of Somaliland has not yet issued a separate Oil or Petroleum Law). Ha iska fiiriyeen inta eyna dhameystirin qeybta u dhiman.
Kaluumeysi ( Fishing).
Heshiisyada Kaluumeysiga, Mar Hore Dalka Shiinaha ayaa u heystay Fasax kaluumeysi in Markabkiibtoodu ey ka bixiyaan $70.000 Fasax calaa-markab waxa uu tagayaa Seychelles, kadibna UN ayaa nooga wakiil ah . calaa markab ayaa la yiri ee Tanka ( Tirada) uu jilaabo karo la isma weydiin. Hadda shiinuhu waaba ka bexeen heshiiskaa oo iyagaaba iska Jilaabta wixii ey doonan.
Waxaan maqalnay in Mar dhaw Thailand ey keentay $ 1.000.000 taa oo ah khidmadii kaluun ey jilaabatay, ma iyadaa iska qiyaastay, mise waa lala xisaabtamay?
Waxaa la yiri: xeebaha dhowr Mile waxaa fasaxeeda bixi karo dowlad gobaleedka, wixii intaa ka fog waxaa Fasaxa bixinayo dowlada dhexe. Hadda waxaa taagan, Dacwada loo heysto Labad Markab oo Thailand ey leedahay oo aan Dowlada dhexe fasax ka heysan waxa ey ku dacwoonayaan in kaluunka ey ka jilaabteen Deegaanka dowlad gobaleedka oo ey fasax ka heystaan.
Waxaa lagu yiri: Maraakiibtiino maba tagi karto meeshaa xeebta u dhaw. waxa ay ku dacwoodeen in Dooma yar yari uga soo jilaabeen xeebta dowlad gobaleedka oo fasax ey u heeystaan , kadibna loogu keenay badweeynta oo ayna u heysan fasax. Taa oo suura gal aan eheeyn. ( F.S: 11-15). Fiiri sawirka 11aad farqiga inta aan jilaabano & inta nalaga jilaabto.
Waxaan u bahanahay. In la dhiso Guddiga Maamulka Khayraadaka (Resource Management Board) oo madax banan, ahna khubaro somaliyeed oo la socoto arrimaha Khayraadka Kaluumeysiga.
FG: Ma ahan in aan Shidaalka iyo kaluunka aan uga aqoon badanahy khubarada & Masuuliyiinta labadaa wasaaradood, waana hubaa in ey joogaan Masuuliyiin iiga aqoon badan Shidaalka & kaluumeysiga una leh takhasus gaara. Laakin Labadan arrimood oo aan fahmi waayay ayaan jeclaan lahaa in ey iiga jawaabto Cidii wax ka taqaan, si anniguna aan uga faa’iido Aqoontiina. Laga yaabee in aan si khalad ah wax u fahmay.
FG: Fadlan, Ha u qaadan dhaliil, ama in aan khalad dhacay ifinayo, waxa aan rabaa oo kaliya in aan ka faa’iido Aqoontaada.wixii iga khaldan iga sax , wixii aqoon la’aani ii geeysay ii toosi si aan aqoontaada uga faa’iido oo aan uga gudbo wixii Jaahilnimo ii geeysay. Mahadsanid.